Qhagamshelana nathi -I-Hebei Kingmetal Flange kunye ne-Fitting Manufacturing Co., Ltd.
Iimveliso zethu zithunyelwa kwilizwe liphela. Abathengi bethu bahlala bonelisekile ngumgangatho wethu onokuthenjwa, iinkonzo ezijolise kubathengi kunye namaxabiso okhuphiswano. Injongo yethu "kukuqhubeka nokufumana ukuthembeka kwakho ngokunikezela iinzame zethu ekuphuculeni rhoqo iimveliso kunye neenkonzo zethu ukuze kuqinisekiswe ukoneliseka kwabo basisebenzisayo, abathengi, abasebenzi, abathengisi kunye noluntu lwehlabathi jikelele esisebenzisana nalo".
xizhaotong park mveliso, shijiazhuang isixeko, hebei, China
Abasebenzi bethu babambelela kumoya "Wokunyaniseka osekwe kunye noPhuhliso oluSebenzisanayo", kunye nomxholo "woMgangatho wokuDidi lokuQala kunye neNkonzo eNcomekayo". Ngokweemfuno zomthengi ngamnye, sinikezela ngeenkonzo ezenzelwe wena kunye nezenzelwe wena ukunceda abathengi bafezekise iinjongo zabo ngempumelelo. Wamkele abathengi abavela ekhaya nakwamanye amazwe ukubiza kunye nokubuza!
Nceda unxibelelane nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba ukuba unemibuzo malunga nombutho wethu. unokufumana ulwazi lwethu lwedilesi kwiphepha lethu lewebhu kwaye uza kwinkampani yethu ufumane uvavanyo lwentsimi kwintengiso yethu. Siqinisekile ukuba sizokwabelana ngempumelelo kunye nokudala ubudlelwane obuluqilima bokusebenzisana namaqabane ethu kule marike. Sikhangela phambili imibuzo yakho.
IYAFUMANEKA NGE-9: 00 TO 6PM